'मेरो फ्लाइट छुट्यो भने सरकारले पैसा तिर्छ?' :: Setopati
'मेरो फ्लाइट छुट्यो भने सरकारले पैसा तिर्छ?' वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड
निर्मला घिमिरे काठमाडौं, जेठ २६
वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा बुधबार सेवाग्राहीको लाइन। तस्बिरः निर्मला घिमिरे/सेतोपाटी
'हामीलाई टोकन नम्बर दिइएको छ। तर, नम्बरअनुसार सेवा दिइएको छैन। सिस्टमअनुसार काम हुने हो भने यस्तो भिडभाड हुने नै थिएन,' कुमारले भने, 'यहाँ न सिस्टम छ न भौतिक दुरी। यस्तै गर्ने भए टोकन नम्बरको भ्यालु के?'
'मेरो १७ तारिखको फ्लाइट छ। आज काम भएन भने अब अर्को बुधबार मात्र कार्यालय खुल्छ। बुधबार १६ तारिख हो। त्यो दिन कुनै कारणले मेरो काम अड्कियो भने के गर्ने?' कुमारले भने, 'मेरो फ्लाइट छुट्यो भने सरकारले पैसा तिर्छ?'
'यसरी खचाखच भएर बस्दा संक्रमण हुन सक्छ भन्ने त उहाँहरूलाई पनि थाहा होला। तर भौतिक दुरी कायम गराइएको छैन। हामी घन्टौंसम्म खचाखच भिडमा उभिनुपरेको छ। पिसिआर गर्दा कोभिड पोजिटिभ देखिएको भने विदेश जान पाइँदैन। लागेको खर्च बेहोरेर त्यहाँको जस्तै सेवासुविधा र काम सरकारले हामीलाई दिन सक्छ?' उनले प्रश्न गरे।
'जसको उडान मिति पहिले छ, उसको काम पहिले गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। आज यहाँ जम्मा भएकाहरू सबैको काम भएन र कसैको उडान छुट्यो भने समस्यामा पर्ने त हामी नै हौं। कर्मचारीको केही जाँदैन। देशमा यत्रो परिवर्तन भयो भनिन्छ, तर हाम्रो सरकारी कार्यालयको शैली कहिल्यै फेरिएन,' उनी जंगिए।
'आज काम भएन भने म त उड्नै पाउँदिनँ,' उनले भने, 'यस्तो भिड छ, भरेसम्म काम हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि टुंगो छैन।'
'कार्यालय खुल्ला गर्ने भन्ने तर कर्मचारी घर बस्ने? यो हामीले भन्ने कुरा त होइन तर भिडभाड हुनुको कारण यही हो,' ती प्रहरीले भने, 'काम भएकै छैन। मान्छे थपिएका थपियै छन् अनि भिड हुँदैन त।'
'हामीले बढीमा ५० जनासम्म आउनुहोला भन्ने अनुमान गरेर त्यसैअनुसार तयारी गरेका थियौं,' उनले भने, 'पहिलो दिन नै सेवाग्राहीको चाप धेरै भयो। अब यसलाई सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं।'
कार्यालयमा उपस्थित भएका सेवाग्राहीहरू सबैलाई सकेसम्म एकै दिनमा सेवा प्रवाह गर्न प्रयास गर्ने उनले बताए। 'यस्तो दुःख गरेर आउनुभएको छ। सकेसम्म हामी सबैलाई सेवा दिन्छौं,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८, १७:५४:००